अचम्म यी युवककाे पेटभित्र भेटिए यतिका धेरै सिक्का | Makalukhabar.com
अचम्म यी युवककाे पेटभित्र भेटिए यतिका धेरै सिक्का
जेठ २९ । के कुनै मानिसले आफ्नो पेटलाई खुत्रुके बनाउन सक्छ ? सक्दो रहेछ त ! भारतमा एकजना व्यक्तिको पेटबाट ७२ वटा सिक्का फेला परेपछि यस्तो खुलेकाे हाे ।
पेटमा ठूलो मात्रामा सिक्का जम्मा भएपछि उनलाई असह्य पीडा हुन लाग्यो र अन्ततः डाक्टरकोमा उपचारका लागि पुगे । डाक्टरहरुले झण्डै ४ घण्टाको शल्यक्रियाबाट उनको पेटमा रहेका ७२ वटा सिक्का निकाल्न सफल भए । एजेन्सी
चट्याङले मानिसलाई छोएको भयावह दृश्य क्यामरामा यसरी भयाे कैद
भाद्र ३ । ‘चट्याङ पर्दा घरभित्रै बस है, बाहिर ननिस्क’ भनेर हामीलाई धेरैजसो आफन्तले सुझाउने गर्छन् । यस्तो किन भनिन्छ, धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । जसलाई थाहा छैन, उनीहरुका लागि यहाँ यस्तो घटनाबारे जानकारी दिँदैछौं जुन निकै भयावह छ ।दक्षिणी क्यारोलिनाका रोमुलस म्याकनिलले एउटा यस्तो घटनाको सामना गरे जुन ह... जारी राख्नुहोस...
विश्वलाई नै चकित तुल्याउने केही तस्बिरहरु
भाद्र २ । चीन आजको विश्वको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र भएका देशहरुमा पर्दछ । विशेष गरेर चीनले पछिल्ला केही दशकहरुमा पाएको विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकास विश्वका लागि एक असल उदाहारण हो भन्दा पनि हुन्छ । आजका दिनमा पनि चीन लगायतका धेरै देशहरुले आफ्नो संस्कार विर्सेका छैनन ।जुन देशले आफ्नो पहिचाहन बच... जारी राख्नुहोस...
अध्यन भन्छ सक्रिय रहनेहरु भन्दा अल्छी व्यक्तिहरु धेरै बुद्धिमान्
भाद्र १, काठमाडौं । सामान्यतया अल्छी व्यक्तिहरुलाई परिवारले मात्रै होईन समाजले पनी राम्रो मान्दैन् । तर अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताहरूले अचम्मको कुरो पत्ता लगाएको दाबी गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार अल्छी व्यक्ति सक्रिय रहनेहरूको दाँजोमा बढी चलाख हुन सक्छन् ।सर्तचाहिँ के छ भने, त्यस्ता अल्छी व्यक्तिहरू बढी... जारी राख्नुहोस...
अचम्मकाे गाउँ जहाँ ढुंगाले हानेर गर्भमा छोरा वा छोरी भएको पत्ता लगाईन्छ
साउन ३० ।गर्भमा रहेको भ्रुण लिंग पहिचान गरी सोही आधारमा बालिकाको गर्भपतन गर्ने कार्य कानूनी रुपमा अवैध छ । भ्रण लिंग पहिचानका लागि सोनोग्राफी लगायतका आधुनिक विधिहरु प्रयोग गरिन्छ । तर भारतमा एउटा यस्तो गाउँ छ जहाँ भ्रुणको लिंग पहिचानका लागि गर्भवती महिलाले पहाडमा ढुंगाले हिर्काउँछन् । पहाडमा चन्द्र... जारी राख्नुहोस...
नेपाली बोटबाट बन्छ जापानी नोट
साउन २९ । जापानको नोट ‘जापानी येन’ बनाउन प्रयोग हुने अर्गेली पूर्वी नेपालको पहाडी जिल्ला पांचथर वर्षौ देखि लगाईदै आईएको छ । जापानका व्यापारीले किसानको घर मै आएर राम्रो मुल्य दिन थालेपछि पाँचथरका किसानहरु बारी छेउ कुना र साँधमा मात्र लगाईने अर्गेलीलाई व्यवसायिकता दिन थालेका छन् । ३ वर्ष... जारी राख्नुहोस...
साउन २८। दक्षिण कोरियाकी एक ६ वर्षीया युट्युब स्टारले लाखौँ डलर पर्ने एक पाँच तले घर खरिद गरेकी छिन् । ३ करोड सब्सक्राइबर भएकी बोरामले अभिभावकद्वारा खडा गरिएको बोराम फेमली कम्पनीमार्फत् सो घर खरिद गरेकी हुन् । सियोलको आधुनिक उपनगर गङ्नामस्थित उक्त घरको मूल्य ९ अर्ब ५० करोड कोरियन वन (८० लाख अमेरिकी... जारी राख्नुहोस...
२० किलो चामलमा ‘डिभोर्स’ भएपछी...
साउन २७ । प्रत्येक धर्मले विवाहलाई एक पवित्र बन्धनको रूपमा मान्ने गर्दछन् । तर केही वैवाहिक सम्बन्धहरू खासै टिक्न सक्दैनन् भने विवाहित जोडीहरूले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णय रोज्ने गर्छन् । सम्बन्ध विच्छेद गराउँदा अदालतले लोग्नेबाट श्रीमतीलाई अंश दिलाउने गर्छन् l जहाँ गुजाराका लागि पैसाका साथ साथै... जारी राख्नुहोस...
अष्ट्रेलियामा एक वर्षमा २२ जना पुरुषले बच्चा जन्माएपछी...
साउन २६ । महिला गर्भवती हुनु र बच्चा जन्माउनु कुनै नयाँ कुरा भएन । सामान्य कुराको समाचार बन्दैन । तर, अष्ट्रेलियामा भने एक वर्षमा २२ जना पुरुष सुत्केरी भएका छन् । जसका कारण समाचार बनेको छ । अष्ट्रेलियाको डिपार्टमेन्ट अफ ह्युमन सर्भिसले जारी गरेको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष २२ जना पुरुष गर्भवती बने र बच... जारी राख्नुहोस...
नुहाउनकै लागि कराेडाै खर्च गछिन् यी महिला
साउन २३ । पाकिस्तान मुलकी बेलायती अर्वपति मोहम्मद जुहरकी श्रीमती कमालियाको शौख सम्बन्धि केही प्रसङ्ग पस्किएका छौं । सुन्दैपनि तपाईंलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । उनी नुहाउनका लागि मात्र प्रत्येक दिन २०–३० बोत्तल स्याम्पेन नामको रक्सी बाथटपमा खन्याउँछिन् । त्यो एक बोतल स्याम्पेनको बजार मूल्य कम्तिमा... जारी राख्नुहोस...
यी सात वर्षीय बालककाे दाँत हेरेपछी डाक्टरकाे होसहवास उड्यो
साउन २२। सात वर्षीय बालक आफ्नो तल्लो बङ्गाराले लगातार दु:ख दिएपछि हस्पिटल पुगे । आफूलाई खानेकुरा चपाउन साथै मुख चलाउन समेत समस्या भएको उनले बताए । बालकको पिडा चाख दिएर सुनिरहेका डाक्टरहरुले उनलाई मुख खोल्न अर्ह्याए । बालकको मुख खोलेपछि डाक्टरहरुले थाहा पाए बालकको बङ्गारा आसपासको भाग सुन्निएको रहेछ।... जारी राख्नुहोस...